के तपाईं पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? अर्थात जति गर्दा पनि पेट घटेन ?अब यसो गर्नुस्,… – News Nepali Dainik
के तपाईं पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? अर्थात जति गर्दा पनि पेट घटेन ?अब यसो गर्नुस्,…
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ समय: ११:१७:०८
के तपाईं पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? अर्थात जति गर्दा पनि पेट घटेन ? साथिभाइ भेटघाट तथा बाहिर हिड्दा पेट देखिएर अप्ठ्यारो पो मानिरहनु भएको छ की ?
यदि तपाईंलाई यो समस्या छ भने तपाईंले लगाउने कपडाले पनि तपाईंलाई केही सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यसको मतलव कपडाले तपाईंको पेट घटाउन र स्वस्थ राख्न त मद्धत गर्दैन तर तपाईंको मोटोपना नदेखाउन भने केही हद सम्म मद्धत गर्छ ।
आजभोली हाइवेस्ट लेगिङ्ग्स र जेगिङ्ग्सको चलन आएको छ । जुन मोटोपन भएकाहरुको लागि एकदमै फाइदाको पक्ष हो । लो वेस्ट अथवा कम्मर मुनीको भागमा लगाउने पाइन्ट लगाउँदा पेट बाहिर निस्किन्छ र व्यक्ति झन् मोटो देखिन्छ । यदि हाइ वेस्ट लगाउने हो भने पेट सबै कपडा भित्र बस्छ र टप्स बाहिरबाट पेट देखिंदैन ।
त्यसैगरी, पेट लुकाउनको लागि ए लाइन टप्स लगाउनुपर्छ, जसमा छातीको भाग ठिक्कको र तलको भाग फुकेको हुन्छ । यदि स्कर्ट लगाउने चाहना छ भने स्कटलाई नाभी देखि माथी लगाउने र टप्स स्कर्ट भित्र पार्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि तपाईंले कपडा बनाउने उचित स्थानमा गएर अर्डर गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुन्छ ।